SIBUSISIWE ISANDLA ESIPHAYO KUNESAMUKELAYO – Sivubela intuthuko Newspaper
UNKK Noncedo Makhoba ongumsunguli weSihlangu Respite Care Centre
OWESIFAZANE waseBulwer eHarry Gwala District onothando lokunakekela izingane ezikhubazekile ucela uMsamariya olungileyo ngokumlekelela njengoba ethi isikhungo sakhe sinezingane ezidinga ukunakekeleka kakhulu. Uthi osekumkhathaza yilezi ngane esesizele noninakhulu emuva kokushiywa ngabazali bazo asebeyogana.
UNkk Noncedo Makhoba waseNkumba utshele uthi eminyakeni edlulile wasungula Isihlangu Respite Centre eBulwer ngoba enothando lokunakekela izingane ezikhubazekile efisa nokulekelela ezomakhelwane abanalezi ngane ngokuthi bazishiye kulesi sikhungo uma benohambo abaluthathayo. “Ngokuba nothando lokunakekela lezi ngane ngabe sengisungula isikhungo esathakaselwa kakhulu emphakathini kwaze kwaba siyabhaliswa ngokusemthethweni. Isikhungo saze sathola nezincomo kuNkk Sindisiwe Chikunga oyilungu lesishayamthetho sikazwelonke owasithengela imibhedede engu-21 ngo-2014 nokunye okubalulekile. UNkk Chikunga washiya uMasipala iNgwe osubizwa ngeDr Nkosazane Dlamini-Zuma ukuba uqhubeke ubheke lesi sikhungo ngokubambisana noMnyango woKuthuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal. Kusukela lapho kasikaze sisizakale kwababeceliwe njengoba sesiphila ngokuqasha indawo esizoyisebenzisa emuva kokuba umphakathi waseXosheyakhe watoyitoya sasilungise ihholo elidala esasisebenzela kulona,” usho kanje.
UNkk Makhoba uthi ukufela ngaphakathi kuba yingozi ngesinye isikhathi ngakho uyazijuba kwabangaba nosizo lokulekelela lezi ngane. “Okubuhlungu siyazihambela izigcawu zabakhubazekile kodwa siye sivalelwe ngaphandle uma sibeka izimvo zethu kuthiwe sikhulumani ngoba kasazi lutho ngokukhubazeka. Yebo, kasazi lutho kodwa sinazo izingane ezikhubazekile esizibhekile okumele sibe yizindlebe nemilomo yazo lapho zingakwazi khona ukuzimela,” ubeke kanje.
UMnu Sikhumbuzo Setutsa okhulumela uMasipala iDr Nkosazana Dlamini-Zuma uthe bebengenalo ulwazi lwezingqinamba zokusebenza ezithikameza Isihlangu Respite Centre. “Likhona ithimba elibheke ukusebenza kwezinkulisa kumasipala wethu. Noma lolu kuwudaba olufaka phakathi kakhulu uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi kodwa sizosibheka ukuthi singasilekelela kanjani lesi sikhungo,” usho kanje.
Okhulumela uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uMnu Mhlabunzima Memela uthembise ukuthi bewumnyango bazothumela ithimba losonhlalakahle elinkanise eBulwer ukubheka isimo seSihlangu njengoba kuvela nokuthi kukhona nabakhubazekile ababhekwe ngoninakhulu babo emuva kokushiywa ngabazali asebeyogana.
OWEZINKANYEZI UKHUTHAZA ABABHALI NGOKUQONDA ULWIMI LWABO LWEBELE